Global Voices teny Malagasy » India: Tata, Jaguar ary Rover. · Global Voices teny Malagasy » Print
India: Tata, Jaguar ary Rover.
Voadika ny 23 Febroary 2018 15:47 GMT 1	 · Mpanoratra Kamla Bhatt Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Atsimo, India, Mediam-bahoaka, Toekarena sy Fandraharahàna
Vao maraina androany (26 Martsa 2008), nambara fa lasan'ny Tata Motrs ao India ny Jaguar sy ny Land Rover an'i Ford Motors, izay iray tamin'ireo telo goavana indrindra mikasika ny fiarakodia ao Michigan fahiny. Ny fahazoan'i Tata an'ireo marika fiara avo lenta roa ireo dia anisany iray tamin'ireo lohahevitra lehibe tao anatin'ireo media mahazatra sy ireo blaogy erantany.
Tao anatin'ny telo volana monja, namorona onjakely tao anatin'ny indostria fanamboarana fiarakodia erantany ny Tata Motors. Tamin'ny fiandohan'ny volana janoary, tao New Delhi, namoaka ny fiarakodiany malaza “Nano” i Ratan Tata, nomeny anaram-bositra hoe “fiarakodian'ny vahoaka”. Izay tena nahatalanjona ny olona, indrindra indrindra ny tontolo manodidina ny fiarakodia, dia ny vidin'ny Nano: 2500 dolara. Ny Nano no fiarakodia mora vidy indrindra erantany. Vao ny androany ihany, namorona onjakely vaovao indray ny Tata Motors tamin'ny alalan'ny fanambarany ny fahazoany ny Jaguar sy ny Land Rover, marika fiarakodia roa fanta-daza an'ilay mpanao fiarakodia ngezalahy amerikana, Ford Motors, tra-pahasahirànana. Handrotsaka 2,3 lavitrisa dolara ny Tata Motors mba hakàna ny Jaguar sy ny Land Rover. Nalain'i Mark Silva ny varotra Jaguar sy Land Rover tamin'ny alalan'ny fanipihana ireo faka britanika an'ireo orinasana fiarakodia roa ireo ary notsipihany tamin'ny fomba maneso ilay varotra. Manoratra izy fa:
Mivadika ny tantara ankehitriny: Miaraka amin'ny fanambarana varotra Jaguar sy Land Rover nataon'ny Ford Motor Co. amin'i Tata Motors ao India, hifindra amina zanatany britanika taloha ho any ankafa ny tompon'ireo marika fiarakodia fanta-daza an'i Grande-Bretagne amin'ity taona ity.
Tsy tantara be mikasika ny fanatontoloana izay hihodinan'ny glaoby amin'ny tenany akory izany… Ankehitriny, ao anatin'ny tantaran'ny tena fandrosoan'ny toekaren'izao tontolo izao, nividy marika roa malaza be tamin'ny Anglisy ny Tata ao India, dia ny Jaguar sy ny Land Rover.
Manontany tena i John Elliot ao amin'ny Ampitaingenana Elephant  hoe raha to afaka hahatapaka tsingerina iray amin'ny fikororosian'ireo marika fiarakodia roa avo lenta ireo i Ratan Tata? Mihevitra i Elliot fa manana tombony amin'ny fanatsoahana an'io i Ratan Tata, saingy manontany tena izy mikasika ny hoe dia iza no handray ny fanodinana an'i Tata (70 taona) raha vao misintaka izy:
I Tata no mamokatra ny fahavitrihana manokana sy ny fitantanana hanodinana ny Tata Motors ho lasa fandraharahana iray izay afaka mamokatra ny Nano ary mividy ireo marika roa fantadaza erantany – ao anatin'ny taona iray. Misy asa goavana miandry olona iray – ary mbola tsy nilaza i Tata hoe iza izay.”
Truemors , blaogy iray an'ny Silicon Valley mandray fomba fijerinà namana sy feno vazivay momba ny nahazoan'i Tata ny Jaguar sy ny Land Rover. Andrasana ny hahatonga ny Jaguar ho fantatra amin'ny anarana ampitiavana hoe “ny havian'i Tata”, raha toa ny Land Rover, somary lehibe kokoa, handray ny andraikitra “havanan'i Tata”.
Mamintina ireo hevi-dehibe mikasika ilay fifampiraharahàna i Krishna Raj avy ao amin'ny My Capital Market Weblog  ao anaty lahatsorany amin'ny blaoginy.
Hanome ireo andiana milina fitarihana ihany koa i Ford, sy ireo kojakoja hafa miaraka aminy . Mifanindran-dàlana amin'io, hanolotra fanohanana ara-teknika izy, ao anatin'izany ny fikarohana sy ny fampiroboroboana. Hanome famatsiam-bola amin'ireo mpanaparitaka JLR , ny Ford Motor Credit mandritra ny 12 volana. Tsy hisy ny fiovàna ao anatin'ireo fepetran'asa ho an'ireo mpiasan'ny JLR. Nanampy ny Ford fa ny fifanarahana dia ahitana ireo marika, ireo ozinina fanamboarana sy ireo IPR. Amin'ny famaranana ny telovolana ho avy ny fifanarahana no hikatona.
Manoratra i Gaurav Shukla ao amin'ny brandfaqs  fa manana orinasa efa ho 98 ny Vondrona Tata ao anaty vàlany ary manome fijery tsara iray mikasika ireo orinasa goavana sasantsasany.
Manipika ny AutoPandit  fa i Tata Motors ankehitriny no mpanamboatra fiarakodia manana marika avo lenta indrindra. Manipika i Nishant Kaushik  fa 10 taona lasa izay, tsy re intsony ny karazan-javatra toy ny hoe orinasa Indiana nividy orinasa fanta-daza. Tsipihan'ny blaoginy hoe hatraiza no fetran'ny fiovàn'i India nanomboka tamin'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/23/115403/
 Mark Silva : http://weblogs.chicagotribune.com/news/politics/blog/2008/03/globe_overturned_india_owns_ja.html
 Ampitaingenana Elephant: http://ridingtheelephant.blogs.fortune.cnn.com/2008/03/25/tata-buys-into-trouble/
 My Capital Market Weblog: http://stockthoughts.wordpress.com/2008/03/26/jaguar-landrover-deal-lands-at-last-in-tatas-couch/
 Nishant Kaushik: http://blog.nishantkaushik.com/?p=287